January 1, 2013 – HlaMin
From U Aung Min (M69)
Dear All 69++er Classmates,,,
Today, (31 December, 2012) we RIT 1969++ classmates heldagrand re-union lunch successfully.
Although we sold the lunch tickets @ 10000 Kyats per head, KO TIN WIN (Mining) took the opportunity of the re-reunion and hosted the Whiskey.
So, almost all the cash, sold amount, will be transferred to the 69er Health Care Fund
Ko Kyaw Zin also brought one liter of Chivas/
Danny, Albert, and Saw Law La Hter are good vocalists at the ceremony.
From Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War)
လာရောက်ဖျော်ဖြေသော နာမည်ရ စွယ်တော်ရိပ် အငြိမ့်..။
ဦးဆောင်သည်။ အစ ပထမတော့ ကြိုတင်ရေးဆွဲ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် အတိုင်း
ရုပ်သေး ကလည်း အချိန်တော်တော်စားသွားဧ။်။RIT ကျောင်းသားပွဲနှင့်
စွယ်တော်ရိပ်အငြိမ့် ထွက်တော့ ပရိသတ်က တစ်ဝက်ပင်မကျန်တော့…။
၀န်ကြီး ဦးအေးမြင့်၊ ဆရာဒေါက်တာအောင်ကြီး၊ ….. နှင့် ဆရာအများစု ပြန်ကြပြီ…။
အငြိမ့် လူရွှင်တော် သြဘာ ပြက်သွားသော ပြက်လုံးတစ်ခု တွင် …”
ကျွန်တော်တို့ ခုလို စားပွဲတွေ ခုံတွေကို ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာ
မနက်ပိုင်းနေကခြစ်ခြစ်တောက်ပူသည်။ ၀ါအရင့်ဆုံး အသက်အကြီးဆုံးဆရာတွေက
စင်မြင့်ပေါ်အရင်တက်၊ ရှေ့ ဆုံး ခုံနှစ်တန်းမှာထိုင်၊ မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁
မနော ကောင်းစွာဖြင့် နှင်းမြူပွင့်လေးများ ဖြန်းပက် သွန်းခြွေပေးသည်။
ဒါကြောင့်လည်း ဆရာကြီးတွေ ညဉ့်နက်ထိ မနေတာများလား…။
Ko Win Htain Oo (M72) commented
The early web sites and bloggers used Zawgyi font.
The newer web sites and bloggers use Unicode.
Ko San Lin (Maung Lu Pay, M83) suggests the use ofafont (e.g. Zaw Decode) that enables the Unicode posts to be read perfectly, but produces some spelling errors for the Zawgyi posts.
Gathering at U Tin Htut’s house